प्रोग्रेशिभ फाइनान्सको हकप्रद मङ्गलवारदेखि | गृहपृष्ठ
Home लगानी प्रोग्रेशिभ फाइनान्सको हकप्रद मङ्गलवारदेखि
on: August 20, 2018 लगानी
प्रोग्रेशिभ फाइनान्सको हकप्रद मङ्गलवारदेखि
भदौ ४, काठमाडौं (अस) । मङ्गलवारदेखि प्रोग्रेशिभ फाइनान्सले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले १ बराबर २ दशमलव ८१ को अनुपातमा ५९ लाख १ हजार कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने भएको हो । अशोज ८ गतेसम्म विक्रीमा रहने यस हकप्रद शेयरमा साउन २२ गतेसम्म कायम सदस्यहरुले आवेदन गर्न सक्नेछन् । विक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
हाल रू. २१ करोड कम्पनीको चुक्तापूँजी रहेको यस कम्पनीको हकप्रद शेयर निष्कासन पछि पूँजी रू. ८० करोड १ लाख पुग्नेछ । हकप्रद जारी पश्चात कम्पनीको शेयर संरचता संस्थापक तर्फ ५१ र सर्वसाधारण तर्फ कर्मचारीहरु समेत गरी ४९ प्रतिशत कायम हुनेछ । हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि कम्पनीले असार ६ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृत पाएको हो ।
कम्पनीले गरेको आगामी तीन वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू. ८० करोड चुक्तापूँजी पुर्‍याउने प्रक्षेपण गरेको छ । सोही विवरण अनुसार आव २०७६/७७ मा रू. १० करोड ७७ लाख ९३ हजार नाफा आर्जन गर्ने प्रक्षेपित लक्ष्य कम्पनीको छ । सोही वर्ष प्रतिशेयर आम्दानी रू. १३ दशमलव ४७ पुर्‍याउने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ । सोमवारको शेयर कारोबारमा कम्पनीको अन्तिम शेयर मूल्य रू. १०० कायम भएको छ ।
प्रोग्रेशिभ फाइनान्सको वार्षिक साधारण सभा असार २९ गते
प्रोग्रेशिभ फाइनान्सको सीईओमा पुनः हुमागाई नियुक्त
प्रोग्रेशिभ फाइनान्सको शिलबन्दी बोलपत्र आज खोलिदै